Momba anay - Nanjing Karlter Decoration Material Co., Ltd.
Nanjing Karlter Decoration Material Co., Ltd.dia orinasam-pitaovana vaovao manokana amin'ny fanondranana ny gorodona vita amin'ny vinina, ny valindrihana matevina volo SPC ary ny gorodona laminate. Ny orinasa dia miorina eo atsinanan'i Sina ary mety tsara hahatratra ny seranan-tsambon'i Shanghai. Manondrana gorodona maro an'isa any Eropa, Amerika avaratra, Amerika atsimo, aostralia, afrika atsimo, sns isan-taona. DIBT, mari-pankasitrahana Floorscore izay efa nolalovanay, mampanantena kalitao izahay aloha, ary ny ekipa mpanara-maso kalitao matihanina dia manome antoka fa afaka mahatratra ny kalitao tsara indrindra izahay.
Ny vokatray dia isan-karazany amin'ny habe sy ny hateviny, ary amin'ny loko isan-karazany hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa. Mandritra izany fotoana izany, isika koa dia afaka manao ny EIR embossing sy ny fitsaboana ambonin'ny. Ny embossing eo amboniny koa isan-karazany. Manohana ny famokarana sy ny fonosana OEM mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa izahay hahazoana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Ny serivisinay aorian'ny varotra dia mihaino tsara ny hevitry ny mpanjifa koa. Hanolotra vahaolana mavitrika izahay hanonerana ny fahaverezan'ny mpanjifa noho ny andraikitray. Mazava ho azy, ny fitsipiky ny fikatsahana fahalavorariana dia ny hampihenana ny fisian'ny toe-javatra toy izany, hahatratrarana ny fiaraha-miasa lavorary amin'ny roa tonta, mpiara-miombon antoka aminao izahay, andao hizotra amin'ny ho avy miaraka amin'ny gorodona.
Ny akora fototra ho an'ny famokarana ny gorodona PVC dia polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride dia loharanon-karena azo havaozina amin'ny tontolo iainana sy tsy misy poizina. Nampiasaina tamin'ny andavanandrom-piainan'ny olona izany, toy ny sakaosy tsy misy sakafo, kitapo fako, arofanina maritrano, sns. Anisan'ireny, ny singa lehibe amin'ny gorodona vita amin'ny vato-plastika (ravina) dia ny vovo-bato voajanahary. Izy io dia andrana amin'ny departemanta manam-pahefana ary tsy misy singa radioaktifa. Izy io koa dia fitaovana haingon-tany amin'ny gorodona vaovao. Ny gorodona PVC mahafeno fepetra dia mila mandalo ny fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena IS09000 ary fanamarinana tontolo iainana maitso iraisam-pirenena ISO14001.
Mazava sy manify manify
Ny gorodona PVC dia 1,6mm-9mm ihany ny hateviny, ary ny lanjan'ny isaky ny metatra toradroa dia 2-7KG fotsiny. Manana tombony tsy manam-paharoa amin'ny fananganana lanja sy fitehirizana habaka ao amin'ilay trano izy, ary manana tombony manokana amin'ny fanavaozana ireo tranobe taloha.
Tena mahazaka fanoherana
Ny velaran'ny gorodon'ny PVC dia manana sosona haingo tsy misy mangarahara momba ny haitao avo lenta. Ny sosona super-marokoroko tsaboina manokana amin'ny sehatra dia manome antoka tanteraka ny fanoherana ny fitafiana tsara amin'ny gorodona. Ny sosona mahatohitra hitafy eo ambonin'ny gorodon'ny PVC dia hafa noho ny hateviny. Amin'ny toe-javatra mahazatra dia azo ampiasaina mandritra ny 5-10 taona izy io. Ny hateviny sy ny kalitaon'ny lamba anaovana dia mamaritra mivantana ny fotoana fampiasana ny gorodona PVC. Ny valim-panadinana mahazatra dia mampiseho fa ny sosona mitafy 0.55mm dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra mahazatra mandritra ny 5 taona mahery, 0.7mm. Ny sosona matevina matevina dia ampy mandritra ny 10 taona mahery, noho izany dia mahatohitra fatratra. Noho ny fanoherana ambony ny akanjo anaovany dia miha malaza eo amin'ny hopitaly, sekoly, tranon'ny birao, toeram-pivarotana, fivarotana lehibe, fitaterana sy toerana hafa misy fifamoivoizana be ny gorodona PVC.
Elastika avo sy fanoherana faran'izay mahery
Ny gorodona PVC dia malefaka amin'ny endriny, noho izany dia manana elastika tsara. Izy io dia manana fanarenana elastika tsara eo ambanin'ny fiantraikan'ny zavatra mavesatra. Ny firafitry ny gorodona mihorongorona dia malemy kokoa ary matevina kokoa. Ny fiononan'ny tongotra dia antsoina hoe "volamena malefaka amin'ny tany", raha ny gorodon'ny PVC kosa dia manana fanoherana mahery vaika ary manana fanarenana mahery vaika amin'ny fahavoazana mavesatra be nefa tsy misy fahavoazana. Ny gorodona PVC tsara indrindra dia afaka mampihena ny fahasimban'ny tany amin'ny vatan'olombelona ary afaka manaparitaka ny fiatraikany amin'ny tongotra. Ny angon-drakitra fikarohana farany dia mampiseho fa nianjera ireo mpiasa rehefa namboarina tamin'ny habakabaka nisy olona marobe ny gorodona PVC tsara. Ary ny tahan'ny naratra dia saika 70% ambany noho ny gorodona hafa.
Ny sosona anaovan'ny velaran'ny gorodona PVC dia manana fananana manokana manohitra ny slip, ary raha ampitahaina amin'ny akora mahazatra, ny gorodona PVC dia mahatsiaro ho matanjaka kokoa raha misy rano miraikitra, ary tsy dia mety mihintsana izany, arakaraka ny vaky ny rano. Noho izany, amin'ny toerana imasom-bahoaka izay avo ny fepetra takian'ny fiarovana ny besinimaro, toy ny seranam-piaramanidina, hopitaly, akanin-jaza, sekoly, sns., Io no fitaovana haingo amin'ny gorodona, izay nanjary nalaza be tany Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny mari-pahaizana fireproof amin'ny gorodona PVC dia mety hahatratra ny haavon'ny B1, ary ny naoty B1 dia midika fa ny fahombiazan'ny afo dia tena tsara, faharoa amin'ny vato ihany. Ny gorodona vita amin'ny PVC mihitsy dia tsy mirehitra ary afaka misoroka ny fandoroana; tsy mamokatra gazy misy poizina sy manimba izay ara-potoana (arakaraka ny isa nomen'ny sampana mpamonjy voina: 95% ny olona maratra amin'ny afo dia setroka misy poizina sy gazy ateraky ny fandoroana an'i To).
Porofon-drano sy hamandoana
Satria ny singa lehibe amin'ny gorodona PVC dia ny resina vinyl ary tsy misy ifandraisany amin'ny rano, dia tsy matahotra rano izy io. Raha mbola tsy alemana lava izy dia tsy ho simba; ary tsy ho voalefona izy noho ny hamandoana avo.
Ny fihenan'ny feo sy ny fihenan'ny tabataba
Ny gorodona vita amin'ny PVC dia manana akora tsotra izay tsy afaka mampitaha ny fandraisam-peo, ary ny fandraisam-peo dia mety hahatratra 20 desibela, noho izany dia mila misafidy gorodona PVC ianao amin'ny toerana mangina toa ny paroasy hopitaly, tranombokim-pianarana, efitrano fampianarana, teatra sns. ny tany dia misy fiantraikany amin'ny fisainanao ary ny gorodona PVC dia afaka manome anao tontolo iainana milamina sy mahaolona kokoa.
Ny velaran'ny gorodona PVC dia notsaboina tamin'ny fitsaboana manokana momba ny bakteria. Ny velaran'ny gorodona PVC dia nampiana manokana tamin'ny mpiasan'ny bakteria. Manana fahaizana mamono mahery izy io ary manakana ny fahafahan'ny bakteria hamokatra ho an'ny ankamaroan'ny bakteria.
Tsotra sy mora ny manapaka sy manasaraka
Amin'ny antsy mahasoa, azonao atao ny manapaka azy amin'ny sitrapony, ary afaka mampiasa ny fitambaran'ireo fitaovana misy loko isan-karazany mba hanomezana kilalao feno ny faharanitan'ny mpamorona ary hahatratra ny vokatra haingo mety indrindra; ampy hahatonga ny taninao ho lasa zavakanto ary hahatonga ny fiainanao Space lasa lapan'ny zavakanto, kanton'ny kanto.
Kofehy kely sy kofehy tsy misy fangarony
Ny gorodona vita amin'ny takelaka PVC manokana dia napetraka sy napetraka mafy, kely ny seams, ary saika tsy tazana avy lavitra ny seams; ny gorodona coil PVC dia mety ho seamless tanteraka amin'ny seamless teknolojia welding, izay tsy azo atao amin'ny gorodona mahazatra. Noho izany, ny effets ankapobeny sy ny effets visuels an'ny tany dia azo hatsaraina hatramin'ny farany azo atao; amin'ny tontolo iray izay avo ny vokatra ankapobeny amin'ny tany, toy ny birao, ary tontolo iainana mila fanamorana sy famonoana otrikaretina, toy ny efitrano fandidiana hopitaly, mety tsara ny gorodon'ny PVC.
Fametrahana haingana sy fananganana
Haingam-pandeha ny fametrahana sy ny fananganana ny gorodona PVC, tsy ampiasaina ny simenitra simenitra, ary tsara ny toetr'andro. Izy io dia mifamatotra amin'ny fiarovana manokana ny fiarovana ny tontolo iainana ary azo ampiasaina aorian'ny 24 ora.
Ny gorodona PVC dia manana loko isan-karazany, toy ny karipetra, vato, gorodona hazo, sns, ary azo namboarina mihitsy aza. Ny tsipika dia azo tanterahina sy tsara tarehy, miaraka amin'ny fitaovana miloko sy kofehy haingon-trano, izay azo atambatra amin'ny haingon-trano tsara tarehy.
Fanoherana ny harafesina asidra sy alkaly
Notsapain'ny fikambanana manam-pahefana, ny gorodona PVC dia misy fanoherana ny harafesina asidra sy alkaly mahery, mahazaka ny fitsapana ny tontolo iainana masiaka, ary tena mety ampiasaina amin'ny hopitaly, laboratoara, andrim-pikarohana ary toerana hafa.
Ny gorodona PVC dia manana fitarihana hafanana tsara, fanaparitahana hafanana mitovy, ary coefficient fanitarana hafanana kely, izay somary milamina. Any Eropa, Amerika, Japon ary Korea atsimo, ny gorodona PVC no safidy voalohany amin'ny gorodona fanafanana gorodona sy ny gorodona, izay mety indrindra amin'ny fananganana trano, indrindra any amin'ireo faritra mangatsiaka any avaratr'i Shina.
Ny fikojakojana ny gorodona PVC dia tena mety, ary ny tany dia maloto ary namaoka amin'ny mop. Raha te hihazona ny gorodona haharitra ianao dia mila mikojakoja savoka tsy tapaka fotsiny, izay ambany lavitra noho ny gorodona hafa.
Azo havaozina ny tontolo iainana
Androany ny fikatsahana fampandrosoana maharitra. Ny fitaovana vaovao sy ny angovo vaovao dia misongadina misesy. Ny gorodona vita amin'ny PVC no hany haingon-trano amin'ny gorodona azo averina namboarina. Io dia misy dikany lehibe amin'ny fiarovana ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana ekolojika.